Tsy misy vaovao: vaovao ratsy… | NewsMada
Mérite sportif : les Barea de Madagascar faits Chevaliers de l’Ordre national ...juillet 16, 2019
Kitra – Fifanintsanana faritra Afrika: tafiditra anaty vondrona amin’ny « Mondial » ny Barea ...juillet 16, 2019
Mérite sportif : les Barea de Madagascar faits Chevaliers de l’Ordre national
Kitra – Fifanintsanana faritra Afrika: tafiditra anaty vondrona amin’ny « Mondial » ny Barea
Barea de Madagascar: un accueil phénoménal
Tsy mbola nisy toa izany ny fitsenana: hotolorana mari-boninahitra sy hahazo tambiny ny Barea
Retour triomphal: Rajoelina va décorer les Barea
Hiverina an-tanindrazana, anio: hakotrokotroka ny fitsenana ny Barea
Kitra – « Can 2019 » Resin’i Tonizia 3 no ho 0: mendrika tanteraka ny Barea na nitolefika aza
Barea vs Aigles de Carthage : 1.350 policiers mobilisés dans la capitale
Ampahefa-dalan’ny CAN: polisy miisa 1 350 hitandro ny filaminana
Tsy misy vaovao: vaovao ratsy…
Par Taratra sur 24/03/2016
Ohabolam-bazaha ny hoe: tsy misy vaovao: vaovao tsara izany. Mby amin’ny fitenenana malagasy hoe: ny amisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa. Saika eritreretina mialoha sy mibahan-toerana hatrany ny zava-dratsy na vaovao ratsy. Hany ka rehefa tsy misy ny vaovao, naman’ny vaovao tsara izany.
Amin’izao toe-draharaham-pirenena izao: tsara izay tsy fisian’ny vaovao izay? Fanamby ny fanovana. Aorian’ny krizy lavareny (n)iaretana sy (n)iforetana, mba hisy masoandro mihiratra amin’izay ahay ny fiainam-pirenena ho amin’ny fanovana, indrindra ny fihatsaran’ny fiainam-bahoaka ifotony.
Nefa tsy misy vaovao… Tsara ve izay? Mihamitombo andro aman’alina, ohatra, ny tsy fandriampahalemana. Fanamarinan-tenan’ny sasany ny tsy fisian’ny asa, ny fahantrana mihalalina, ny gaboraraka miseholany… Tsy vaovao ho azy ny tsy fifampitokisana eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra.
Tsy zava-baovao, na naman’ny vaovao ratsy isan’andro vaky koa ny fidangan’ny vidim-piainana efa ho lava; eny, na mba nihena kely aza, ohatra, ny vidin-tsolika. Tsy mahataitra intsony fa efa tsy vaovao toy ny fandrobana sy fanondranana an-tsokosoko harem-pirenena: andramena, vatosoa, sokatra…
Toy ny firongatry ny fanolanana, herisetra, fisolokiana… Manampy trotraka ny ady tany etsy sy eroa. Efa tsy misy vaovao koa ny tsy fanarahan-dalàna, ny fanamparam-pahefana, ny fitsaram-bahoaka… Ratsy avokoa ny tsy fisian’ny zava-baovao amin’izany, satria tsy hita izay mba hoe fiovana amin’izao.
Tsy zava-baovao mbamin’ny tsy fahavitana inona loatra? Misy milaza fa asa andavanandro amin’ny tokony hatao sy fampandehanan-draharaha izao iainana izao, fa tsy fanarenam-pirenena sy fampandrosoana. Tsy zava-baovao mbamin’ny fanamby sy fampanantenana? Na ny karazana fampielezan-kevitra…
Tsy vaovao na vaovao ratsy koa izay hitranga rahampitso sy rahafakampitso? Tsy mba hiainana eto ny hoe: raha tsy misy vaovao, naman’ny vaovao tsara izany. Ratsy hatrany tsinona no nifandovana teto hatramin’izay? Andrasana sy takina izany izao izay vaovao ratsy ho amin’ny tsara izay…
Mérite sportif : les Barea de Madagascar faits Chevaliers de l’Ordre national 16/07/2019
Kitra – Fifanintsanana faritra Afrika: tafiditra anaty vondrona amin’ny « Mondial » ny Barea 16/07/2019
Hetsiky ny olom-pirenena: « Ovana ny Ceni sy ny HCC…” 16/07/2019
Fakafaka: tsy fanao ny safosioka fa aleo mijery ifotony 16/07/2019
Lalaon’ny nosy: efa milamina ny fandaharam-potoana rehetra 16/07/2019
Réactions des joueurs après leur beau parcours à la Can 2019